Momba anay - YIXIAN LONGSHAN STONE MATERIALS CO., LTD
Ny vato Longshan dia natsangana tamin'ny taona 1988, miaraka amin'ny renivola voasoratra anarana 10 tapitrisa yuan. Any Yixian, Baoding City, Hebei any Sina no nahatonga an'i longshan ho lasa orinasa maoderina miaraka amin'ny fanodinana, famokarana, fivarotana ary asa fanompoana.
Ny atrikasa dia manana atrikasa famokarana maoderina, fitaovana famokarana mandroso, fampitaovana miasa tonga lafatra, famokarana isan-taona ny vatosoa voajanahary 500.000 metatra toradroa, vatokely 20 000 taonina, vatosoa 40.000 metatra toradroa, fidiram-bola mitentina $ 3 tapitrisa isan-taona.
Ireo vokatra amidy any Italia, Alemana, Kanada, Japon ary firenena maherin'ny 50 sy ny tompon-trano lehibe. Maherin'ny telopolo taona ny asa mafy, Longshan no lasa ivon-tsarimihetsika famokarana. Nihevitra ireo mpanjifa vahiny fa fahazarana ny mividy slate avy any Chine, ary mankany Yixian, any Longshan ihany.
Tamin'ny taona 2000, Longshan dia nandalo ny rafitra fanamarinana kalitao iraisam-pirenena ISO9001: 2000 voalohany teo amin'ny faritra slate ary ny vokatra vato avy any longshan dia nandany ny antoko fahatelo tamin'ny fizahana HK ITS. Longshan Stone dia nahavita nanolotra ny kianjan'ny Birds'Nest Stadium amin'ny Lalao Olaimpika Beijing tamin'ny 2008 ary nametraka vatosoa manodidina ny 10.000 metatra toradroa. Longshan vato dia nahazo fiderana avo avy amin'ny mpanjifa ao an-trano sy any ivelany noho ny vokatra avo lenta sy laza azo antoka.
Ny vato avy any Longshan dia nohararaotina tamin'ny fametrahana vato izay namorona an'arivony tapitrisa taona lasa izay. Ny kalitaon'ny fanamafisana dia azo antoka fa namaritra ny tanjaky ny hiondrika, ny fanoherana ny tsindry, ny fanamafisana ary ny fanoherana. Ny vato Longshan dia nantsoina ho fitaovana haingon-trano maintso noho ny atiny ambany amin'ny radioaction raha ampitahaina amin'ny tahan'ny fenitra The International Commissionon on Radiological Protection. Ny vokatra vato dia miaraka amin'ny loko mamirapiratra sy ny firafitra manokana ary ny fomba isan-karazany, toy ny taila, vato holatra, vato tafo, paty netina, vato ara-kolontsaina, mozika, granite sns. Ary izy ireo dia ampiasaina amin'ny tranom-panjakana, villa, tokontany, zaridaina ary fananganana hafa be dia be, mampirehitra ireo trano ho kanto ary mitondra olona amin'ny tontolo voajanahary, ary koa karazana fitaovana fanaka haingo sy maody ankehitriny.
Longshan vato dia namolavola sy namolavola lohatenim-baovao momba ny Lohataona Yizhou-Pretty, Ao amin'ny Meiquanshi Sinoa miaraka amin'ny fahazoany sy fikarohana lalina nandritra ny roapolo taona. ary nomena mari-pankasitrahana nasionaly 25. Ity karazana Humidifier-Spring ity dia afaka mifehy ny hamandoana amin'ny sehatra mety indrindra ho an'ny vatan'olombelona amin'ny alàlan'ny rano fanodinana azy, manjavona voajanahary, miaraka amin'ny fiasa fanamainana, famenon-drano ary manadio. Ankehitriny Longshan Stone dia nandefa azy io tany an-tsena, ary nahazo laza tsara be.
Amin'ny ho avy, Longshan Stone dia hanaraka hatrany ny fitsipiky ny 'fitondrana ny olona amin'ny fahitsiana, ny fiezahana mafy amin'ny fo, ny fiezahana hanana kalitao ambony sy ny fahombiazana avo lenta, miorina amin'ny trosa tsara' ary hiara-hiasa am-pahatsorana sy malalaka amin'ireo mpanjifa anatiny sy ivelany.